Nwoke Ochie na Oke Osimiri, oru nke mere Hemingway onye Nobel Nrite | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Agadi nwoke na oke osimiri
John Ortiz | | Ndị edemede, Novela, Akụkọ
Agadi nwoke na oke osimiri (1952) bu ihe akuko akuko nke American Ernest Hemingway. Mgbe edere ya, onye edemede ahụ laghachiri n'ọgụ akwụkwọ. Akụkọ a sitere na ahụmịhe onye ode akwụkwọ na azụ na Cuba. N'ime ntakịrị peeji 110, o weghaara ahụmahụ nke otu onye ọkwọ ụgbọ mmiri ochie na ọgụ na mgba iji weghara nnukwu azụ marlin.
E bu ụzọ bipụta akụkọ a dị mkpirikpi na magazin ahụ Life, nke mere ka obi sie Hemingway ike, ebe ọ bụ na akwụkwọ ya ga-adịịrị ọtụtụ ndị na-enweghị ike ịzụta ya. N'ajụjụ ọnụ o kwupụtara: "... nke a na-eme m obi anụrị karịa mmeri Nobel." N'ụzọ ụfọdụ, okwu ndị a ghọrọ ihe atụ, dị ka e nyere onye edemede ahụ Nobel Nrite maka Akwụkwọ na 1954.
1 Nchịkọta nke Nwoke Ochie na Oke Osimiri (1952)
1.1 Nnukwu agha
1.2 Na-atụghị anya ọgwụgwụ
2 Nyocha gbasara Nwoke Ochie na Oke Osimiri
2.2 Style egosi
2.3 Nkọwa dị iche
3 Biofọdụ biographical data nke na-ede akwụkwọ
3.1 Mmalite nke nta akụkọ na agha ụwa mbụ
3.2 Onye nta akụkọ agha
3.3 Rarydị edemede
Na nchikota nke Agadi nwoke na oke osimiri (1952)
Santiago es onye oku azu ama mara na Havana dị ka "ochie". Ya na-aga site na ike ike kwachie: ọzọ nke Daysbọchị 80 enweghị nweta mkpụrụ nke azu. O kpebisiri ike ịgbanwe akụ ya, ọ na-ebili n'isi ụtụtụ ịbanye na Osimiri Gulf, ihe niile di ka o na adi nma mgbe o na ata aru n’elu nko ya iyak marlin. Ọ na-ahụ nnukwu ihe ịma aka a dị ka ụzọ isi gosi ndị ọzọ nkà ya.
Agadi nwoke ahu busoro ya agha ruo ubochi ato buru ibu ma sie ike azu; n’ime ogologo oge ndị ahụ ọtụtụ ihe gabigara n'uche ya. N'etiti ha, ya gara aga, mgbe nwunye ya biri ma nwee obi uto ọganihu na ọrụ ha. O chetakwara Mandolin, nwa okorobia onye o kuziri ya aka oru a site na nwata ya burukwa onye ya na ya kwesiri ntukwasi obi, mana onye lara.
Na-atụghị anya ọgwụgwụ
Santiago nyere ihe niile, ma na otu ikpeazụ mgbalị jisiri ike chekwaa azụ na-ewere ụbọ akwara ya. Nganga na ya feat, o kpebiri ịlaghachi. Laghachi n’ala adịghị mfe ma ọlị, ebe ọ bụ na azụ azụ ochie a na-azụ azụ na azụ shark ndị zoro n’azụ. Ọ bụ ezie na ya na ọtụtụ lụrụ ọgụ, nke nta nke nta, ha jisiri ike rie nnukwu azụ ahụ ma hapụ naanị ọkpụkpụ ya, nke na-eme ka e nwee mmeri na agadi nwoke ahụ.
Mbubreyo mbubreyo, Santiago ruru n’ikpere mmiri; hapụrụ ụgbọ mmiri ya na ihe fọdụrụ nke nnukwu azụ wee laa n’ụlọ n’ike gwụrụ oke mwute. N’agbanyeghi na o nweghi ihe foduru n’akụkụ marlin ahụ, oke mmadụ nwere n’ụdị ahụ juru onye ọ bụla nọ n’obodo ahụ anya. Mandolin nọ ebe ahụ wee hụ ọbịbịa ahụ, ọ kwara ụta maka ịhapụ agadi nwoke ahụ, ya mere o kwere nkwa iso ya ọzọ n'ọrụ.
Nwoke ochie na oké osimiri ...
Nyocha nke Agadi nwoke na oke osimiri
Akụkọ ahụ nwere a asụsụ doro anya ma dị mfe, nke na-eme ka ịgụ ihe na-aga were were n'ọnụ ma na-atọ ụtọ. N'agbanyeghị na enweghị ọtụtụ peeji - iji tụnyere akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ -, enye ok na ogo ọdịnaya. Enwere ọtụtụ nkuzi dị na akụkọ a, nke, na mgbakwunye, ga-adabere na nkọwa nke onye na-agụ ya. Ọ bụ ya mere ị ga - eji nwee ike ịchọta echiche dị iche iche banyere ọrụ a.
Akụkọ a dị mkpirikpi na-egosi ụdị pụrụ iche nke onye edemede. E webatara otu dike - Santiago, onye ochie na-akụ azụ - n'agbanyeghị na ọ katala afọ, ike agwụghị ya. Dị ka mgbe niile, enwere okwu dị elu: enweghị azụ; agbanyeghị, akụkọ ahụ gara n’ihu. Agwa ahụ gafere ọtụtụ usoro ọnọdụ mmadụ, dịka owu owu, ndakpọ olileanyama ọ bụ mfu, ma ọ na-ebiri ha niile n’atụfughị ​​uche ya na obi ike ya.
Nkọwa dị iche
Anyị na-eche ihu ihe ha kpọrọ njedebe na-emeghe. Akụkọ enweghị ihe ọ ga-arụpụta,, ebe ọ bụ na akọwaghị ya ihe na-eme na Santiago. Ya mere, a hapụrụ ihe niile na nkọwa nke onye na-agụ ya. Dịka ọmụmaatụ, mwute na mmeri nke onye ọkụ azụ na-alaghachi nwere ike ịkọwa na njedebe nke ịdị adị ya.
Obi abụọ adịghị ya, Nwoke ochie ahụ na oké osimiri Ọ bụ akwụkwọ na-eme ka ị tụgharịa uche n'ọtụtụ ọnọdụ ndụ. N'agbanyeghi na obu onye isi okwu banyere njem nke ndi oku azu nke na-agabiga ihe ojoo, akuko a na-emetuta ihe ndi ozo, dika: ọbụbụenyi, iguzosi ike n'ihe, nnọgidesi ike, enweghị ụjọ, mpako, owu ọmụma y ọnwụ, ịkpọ aha ole na ole.
Biofọdụ biographical data nke na-ede akwụkwọ
Onye edemede na odeakụkọ Ernest Miller Hemingway Amụrụ na Fraịdee, Ọgọstụ 21, 1899 na Oak Park Village na ugwu Illinois. Ndị mụrụ ya nọ: Clarence Edmonds Hemingway na Grace Hall Hemingway; ya, onye dibia dibia bekee; ya onwe ya kwa, onye ukwe na ndi ukwe. Ha abụọ dị ndị a na-akwanyere ùgwù na mmekọrịta ọha na eze Oak Park.
Ernest gara Oak Park na River Forest High School. Mgbe ọ dị obere, ọ gara —N'etiti ọtụtụ isiokwu— akwukwo ndi oru nta akuko, nke Fannie Biggs kwuru. N'okwu a, enyere ndị ode akwụkwọ kacha mma onyinye site na mbipụta nke isiokwu ha n'akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ, akpọrọ: The trapeze. Hemingway merie site na edemede mbụ ya, Ọ bụ banyere Chicago Symphony Azam ma ewebata ya na 1916.
Mmalite nke nta akụkọ na agha ụwa mbụ
Na 1917 - mgbe ọ jụrụ ịga kọleji - ọ kwagara Kansas. Ebe ahụ malitere ọrụ ya dị ka onye nta akụkọ na akwụkwọ akụkọ Kansas City Star. Na-eche naanị ịnọ ebe a maka ọnwa 6, ọ nwetara ahụmịhe zuru oke iji rụọ ọrụ ya n'ọdịnihu. Emechaa sonyeere Red Cross iji gaa WWIN'ebe ahụ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala ụgbọ ala na-aga n'ihu na Itali.
Onye nta akụkọ agha
Mgbe ihe mberede ụgbọ ala, Ernest laghachiri obodo ya, ebe ọ laghachiri na akwụkwọ akụkọ. Na 1937 ọ gara Spain dị ka onye nta akụkọ site na Alliance nke North American Newspaper ikpuchi agha obodo Spanish. Otu afọ mgbe e mesịrị, ọ kọọrọ ihe omume nke Agha nke Ebro na n'etiti Agha IIwa nke Abụọ ọ hụrụ D-Day, ebe Operation Overlord malitere.
Hemingway Ewere dịka akụkụ nke Ọgbọ furu efu, otu ndị Amerịka bidoro ọrụ ide ihe mgbe agha ụwa nke mbụ gachara. Ọ bụ n'ihi nke ahụ ọrụ ya na-egosi ndakpọ olileanya na enweghị olileanya nke oge siri ike. Ejiri akuko ya na akuko akwukwo ya site na edere ya n'akwukwo akuko, ya na okwu ndi ozo di nkenke na iji obere ihe omuma.
Onye edemede achoputara na o nwere udidi puru iche, nke kara akara tupu na mgbe edere ya na akwukwo edemede. Akwụkwọ mbụ ya, Fiesta (1926), malitere ọrụ ya. Ọrụ a gosipụtara ụzọ nke ederede, nke Hemingway akpọ: nkuzi iceberg. Na ya, onye edemede ahụ na-ekwusi ike Ebumnuche maka akụkọ ekwesịghị inyefe onye na-agụ ya ozugbo, ma ga-apụta ìhè.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Agadi nwoke na oke osimiri
Ndewo, aha m bụ Areli na m hụrụ blog a n'anya, achọpụtara m na ọ na-atọ m ụtọ, m ga-alaghachikwa ọtụtụ oge ebe ụzọ egosi ọdịnaya ahụ dị oke mma ma na-atọ ụtọ na anyị bụ ndị hụrụ ya n'anya na-akpali anyị ịgụkwu ma mara ihe banyere uwa ndi edere ede. Eziokwu bụ na enwere m mmasị na blọọgụ a n'ihi na oge ụfọdụ ọ dị m ka nwatakịrị nwanyị na ụlọ ahịa swiiti n'amaghị ụdị ụtọ na-ahọrọ ihe niile na-atọ ụtọ nke na achọrọ m ịgụ ihe niile yaaa.
Sara Gutierrez. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Oge Ikpeazụ nke USSR
Onye mọnk nke rere Re Ferrari